စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #1
စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #2
စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #3
စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #4
စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #5
စစ်အေးတိုက်ပွဲ crossword #6
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - 1945 မှဖြစ်ရပ်များ 1950
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - 1950 မှဖြစ်ရပ်များ 1959
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1960-1979
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - 1980 မှဖြစ်ရပ်များ 1991
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အုပ်စုများ
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ခေါင်းဆောင်များ
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အသုံးအနှုန်းများနှင့်သဘောတရားများကို (ငါ)
စစ်အေးတိုက်ပွဲမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အသုံးအနှုန်းများနှင့်သဘောတရားများကို (II ကို)
စစ်အေးတိုက်ပွဲ wordsearch - အယူအဆများ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ wordsearch - ဖြစ်ရပ်များ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ wordsearch - အုပ်စုများ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ wordsearch - လူတွေ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ wordsearch - သောနေရာများ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ 1945 နှင့် 1991 အကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၏ရှည်လျားသောကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်၎င်းတို့၏မဟာမိတ်များအကြားပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုများကမှတ်သားခဲ့သည်။
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ '' စစ်အေးတိုက်ပွဲ '' အောက်တိုဘာလ 1945 အတွက်အခြားဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်မှာအစွမ်းထက်လူအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်မဟာမိတ်လာကြတယ် "စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောတည်ငြိမ်ရေး" ၏ကာလခန့်မှန်းတဲ့သူစာရေးဆရာဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်ကစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်, ပြောဆိုဆက်သွယ်သို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ငြင်းဆန်။
အော်ဝဲလ်ရဲ့ဆိုးရွားခန့်မှန်း 1945 အတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြလာတယ်။ ဥရောပနာဇီအာဏာရှင်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အနောက်ဘက်တွင်အရှေ့ဘက်တွင်ဆိုဗီယက်နီကြည်းတပ်နှင့်အမေရိကန်များနှင့်ဗြိတိသျှကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ညီလာခံမှာ Post-စစ်ဥရောပများ၏အနာဂတ်ည့်ကျဇယားရန်, တင်းမာမှုများပေါ်ပေါက်လာ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်များအကြား ယောသပ်သည်စတာလင် နှင့်သူ၏အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန် counterparts တွေကို။
Mid-1945 အသုံးပြုပုံဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အနောက်တိုင်းလူအမျိုးမျိုးတို့အကြား Post-စစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏မျှော်လင့်ချက်များ dashed ခဲ့သညျ။ အရှေ့ပိုင်းဥရောပမှာတော့ဆိုဗီယက်အေးဂျင့်ကဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးသမားချက်ချင်းအာဏာသို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီများတွန်း Winston Churchill တစ်ဦး၏သတိပေးဖို့ "သံကုလားကာ"ဥရောပအပေါ်ဆငျး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန် မာရှယ်စီမံကိန်းဥရောပအစိုးရများနှင့်စီးပွားရေး restore မှတစ်လေးနှစ် $ 13 ဘီလီယံခန့်အကူအညီအထုပ်။ နှောင်းပိုင်း 1940s အသုံးပြုပုံဆိုဗီယက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်အနောက်တိုင်းအကူအညီနှစ်ခုလာကြတယ်သို့ဥရောပခွဲထွက်ခဲ့သည်။
1948 ဆိုဗီယက်နှင့်ဂျာမန်အရှေ့ကြိုးစားမှုအတွက် ဘာလင်ထဲကအနောက်တိုင်းအင်အားကြီးအငတ်ထား သမိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံး airlift အားဖြင့်ပွားခဲ့သည်။ 1961 ခုနှစ်တွင်အစိုးရ အရှေ့ဂျာမဏီတစ်ဦးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေး၎င်း၏နယ်စပ်ကိုဆင်းသော့ခတ်နဲ့ဘာလင်၏ခှဲဝေမြို့အတွက်ပြည်တွင်းရေးအတားအဆီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဘာလင်တံတိုင်းဒါကြောင့်လူသိများခဲ့သည်အတိုင်း, စစ်အေးတိုက်ပွဲတစ်ခုမွဲသင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲတင်းမာမှုတွေလည်းဥရောပနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 1949 ခုနှစ်တွင်တရုတ်တော်လှန်ရေးမော်စီတုန်းနှင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အောင်ပွဲနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအာရှအပေါ်စစ်အေးတိုက်ပွဲအာရုံပြောင်းရွေ့နေစဉ်တရုတ်လျင်မြန်စွာ, စက်မှုနှင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1962 ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် ကျူးဘားကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ဆိုဗီယက်ဒုံးကျည် နြူကလီးယားစစ်ပွဲ၏ချောက်ကမ်းပါးမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွန်း။
ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်များသံသယ, ယုံကြည်မှုများ, လီယံနှင့်လျှို့ဝှက်၏မကြုံစဖူးအဆင့်ကိုလောင်စာ။ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (စီအိုင်အေ) နှင့်တူအေဂျင်စီများနှင့် Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) သူတို့၏တိုးလာ လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားမှုများ ရန်သူပြည်နယ်နှင့်အစိုးရများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ။ သူတို့ကအစမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုများ, အုံကြွမှု, အားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့အခြားတပါးအမြိုးသားနိုငျငံရေးတှငျဝငျရောကျစှကျ အာဏာသိမ်းမှု နှင့် proxy ကိုစစ်ပွဲများ.
သာမန်လူတွေအများဆုံးအထူးကြပ်မတ်တစ်ဦးမှတဆင့်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်စစ်အေးတိုက်ပွဲကြုံတွေ့ ဝါဒဖြန့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး လူ့သမိုငျး၌တည်၏။ စစ်အေးတိုက်ပွဲတန်ဖိုးများနှင့်နျူကလီးယားလီယံအပါအဝင်လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှု၏အားလုံးရှုထောင့် permeated ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် ဂီတ.
alpha သမိုင်းရဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲက်ဘ်ဆိုက် 1945 နှင့် 1991 အကြားနိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုများလေ့လာနေများအတွက်ပြည့်စုံကျောင်းစာအုပ်အရည်အသွေးကိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနီးပါး 400 အသေးစိတ်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်များ ခေါင်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်, စာရွက်စာတမ်းများ, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်, စာလုံးအဓိပ်ပါယျ နှင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိများ။ အဆင့်မြင့်ကျောင်းသားများကိုစစ်အေးတိုက်ပွဲအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် သမိုင်း နှင့် သမိုင်းပညာရှင်။ ကျောင်းသားများလည်းအပါအဝင်, အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသိပညာနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစမ်းသပ်နိုင်သည် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, crosswords နှင့် wordsearches။ မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်ဘေးဖယ်, အာလဖသမိုင်းမှာအားလုံးအကြောင်းအရာအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆရာ, ဆရာမများ, စာရေးဆရာများနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များကရေးသားထားသည်။
ဒါဟာစစ်အေးတိုက်ပွဲ site ကို 1945 နှင့် 1991 အကြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်တင်းမာမှုများအပေါ်ဆောင်းပါးများ, သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အမြင်များပါရှိသည်။ ဤ site အာလဖသမိုင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့် 308,862 စာမျက်နှာများတွင် 405 စကားလုံးများကိုပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏သွားရောက်ကြည့်ရှု မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာ or သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ.